I-SM Doll - i-TPE ephezulu kunye ne-Silicone ye-Silicone ye-Sex Dolls-Ixabiso eliphantsi liyathengiswa
Ukuhenda Amehlo Amakhulu B Indebe ye-Emma Finn edlalayo ebomvu yoLusu lweenwele TPE 157CM Uthando lwabantu abadala
Amehlo kaBrown Isitayile saseYurophu i-160CM B yeNdebe yeDrama yeSondo uSabina Coleridge
I-Black Stunner N yeNdebe yeVera Raman Plump enkulu ye-Butt esinqeni esincinci i-168cm ye-TPE yabantu abadala
Thenga unodoli wothando wamva nje we-SM ovela kwii-Urdoll ezigcweleyo kwiNgqokelela kaNodoli wokwenyani
Latest Unodoli weSM TPE kunye Oonodoli be-Silicone ngesondo ekhoyo! Ivenkile yethu ngoku ibonelela ngefomyula entsha kunye nephuculweyo, enenyani ngakumbi kunye nendalo, i-silicone ye-SM kunye nefomula kanodoli we-TPE!
Uphawu: SM Doll
Material: TPE & Silicone Sex Dolls Uhlobo: Oonodoli bezesondo baseMelika, iiDoli zeSitayile saseYurophu, iiDoli zeSini zamabele amakhulu, iiDoli zeSex eziSlim njalo njalo.
Intshayelelo: Wamkelekile kwi-SM Doll Sex World. I-SM Doll inezinye zezona zidumileyo ze-TPE kunye noonodoli be-silicone bezesondo abadibanisa owona mgangatho uphezulu ngexabiso elifikelelekayo ngelixa ikuvumela ukuba wenze unodoli wamaphupha akho ngendlela ofuna ngayo. Ukuba ujonge ngakumbi SM oonodoli, usendaweni efanelekileyo, i-urdolls iyisistim esisemthethweni soonodoli be-Sex-end kwivenkile ye-intanethi. I-SM Doll njengomvelisi, ibambelela kumgangatho kunye nophuhliso lwe-brand, ungalokothi wenze umgangatho ophantsi kunye nexabiso eliphantsi, likholelwa ukuba alizange libe lixabiso eliphantsi, kodwa kufuneka ibe yeyona ifanelekileyo, ethembekileyo kwaye ihambelana nokusingqongileyo kweendleko. Oonodoli beSM bayakwazi ukwenzeka ngokupheleleyo, khetha ngokulula zonke iinketho zakho ozithandayo kwaye ujike ezakho. SM uthando unodoli Intelekelelo kwiqabane lothando lobomi bokwenyani namhlanje.Ukunikezela kuthando lwakho loonodoli ngelixa uchitha kancinci kangangoko.
+ I-silicone enexabiso eliphantsi kunye noonodoli besondo be-TPE
+ Ukukhetha okukhulu kubungakanani bobomi oonodoli bezesondo be-SM Doll
+ Uphando olomeleleyo kunye namandla okuphuhlisa unodoli wesondo
+ Uyilo oludumileyo olugqwesileyo kunye noonodoli besondo obukumgangatho ophezulu